Kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Boubakary Soumare – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Boubakary Soumare
(Yurub) 23 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa laacibka khadka dhexe ee Lille, Boubakary Soumare.
Los Blancos ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay kula tartanto kooxaha Liverpool iyo Barcelona saxiixa xiddiga khadka dhexe uga dheela naadiga Lille ee Boubakary Soumare inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddiagha ee xagaagan.
21-sano jirkaan, kaasoo si weyn loola xiriirinayey suuqii Janaayo u dhaqaaqitaanka horyaalka Premier League ayaa 30 kulan u saftay kooxdiisa Lille intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan 2019-20.
Xiddiga khadka dhexe ayaa kaliya ciyaaray kaliya mid ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Ligue 1, inkastoo la sheegay inuu muujiyay sida uu uga careysan yahay inuusan dhaqaaqin suuqii Jilaalka.
Labada koox ee Liverpool iyo Barca ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale miisaameen inay u dhaqaaqaan xagaagan soo xero-gelinta laacibkan xulka France ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada.
Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Spain ayaa sheegaya in Los Blanco says idoo kale ugaasi ugu jirto xiddigan khadka dhexe, kaasoo lagu heli karo adduun dhan 27 milyan oo euro oo u dhiganta 25 milyan oo gini.
Soumare ayaa qandaraaskiisa haatan uu kula jiro Les Dogues waxa uu socon doonaa illaa xagaaga 2022-ka.